4 Inch Centre Igumbi lokuhlambela faucet Nge-Pop-Up Drain Assembly
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / I-WOWOW Centerset Igumbi lokuhlambela elineNdibano yePop-Up yokukhupha amanzi
UKUFAKEKELA OKULULA & INKHALISO YOKLASI: 4” iifaucets zilingana ne-3-Hole Mount; 4″ iseti yangaphakathi kunye noyilo oluphezulu lwe-arc luvumela ukufakwa lula —— Ipakethi yeefaucethi zenickel ezibrashwayo ibandakanya ukudityaniswa komjelo.
AMAVA AMANZI OMKHULU: I-faucet yokuhlambela inezibambo ezi-2, ezenza kube lula ukulungisa amanzi kunye nobushushu! I-arc spout ephezulu ikunika imvume eyaneleyo phantsi kombhobho. Ngoyilo lwefashoni yakudala ye-retro, le faucet yenickel yenza igumbi lakho lokuhlambela libe sefashonini ngakumbi.
KULULA UKUCOCWA & KULULA: Umbhobho wokuhlambela we-nickel oxutyiweyo ugqibezele i-nickel ungaxhathisa umhlwa. Le mibhobho mi-2 yokuhlambela ilingana nendlu erentwayo, i-condo entsha, i-apartment enye, ikhaya lemoto, i-trailer yokuhamba kunye nokusetyenziswa kosapho.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO NGExabiso : Ubungakanani obuphezulu bomlenze kunye nolwakhiwo oluqinisekisa ukuqina kunye nokuxhomekeka.Itofu yomyili we-Premium Ceramic Disc, yenza ukuba amanzi aqukuqelele ahambe, angathontsi. Sinikezela ngeWARANTY YEMINYAKA emi-3 yeetepu zokuselela kwigumbi lokuhlambela.
YONGA AMANZI NEMALI YAKHO: i-spout ye-lavatory faucet eyenziwe nge-aerator ye-ABS. Uza kukwazi ukonga kumatyala akho amanzi ngelixa uncedisa ukonga amanzi. Le aerator inokuthatyathwa phantsi ngokuthe ngqo ngezandla zakho ukuze ucoce (akukho zixhobo ezifunekayo). Ithontsi yasimahla ikhatriji yeceramic inyamezela. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba kukho nayiphi na imibuzo.
I-SKU: 2321400 iindidi: Iziko lokuqubha leepompo zangasese, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: 2 Bamba, 4 intshi, Uqhekeze uNickel
Igumbi lokuhlambela eligcwele iMatte emi-3 yale mihla emnyama...